Inona no dikan'ilay teny hoe Eroica? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Inona ny erika - valiny amin'ireo olana
Inona ny erika - valiny amin'ireo olana
Inona no dikan'ilay teny hoe Eroica?
Eroica. toy ny anaran'ny zazavavy dia italiananiaviany, ary nyhevitranybe herim-podia 'mahery fo'. Composer Beethoven's 'be herim-poSymphony 'dia natao ho fanomezam-boninahitra an'i Napoleon tany am-boalohany.
Nandritra ny tantaran'ny zanak'olombelona, ​​teny kely telo no nametraka poeta teo amin'ny pejy banga, filozofa momba ny agora ary ireo nitady ny oracles: 'Iza moa aho?' Avy amin'ny aphorism grika taloha voasoratra tao amin'ny Tempolin'i Apollo, 'Fantaro ny tenanao', ka hatramin'ny hoe Who's rock anthem 'Who Are You?' Ireo filozofa, psikology, akademia, mpahay siansa, mpanakanto, teolojiana ary mpanao politika dia samy niady tamin'ny olana momba ny maha-izy azy avokoa. Hafa mihitsy ny fihevitr'izy ireo ary tsy misy marimaritra iraisana. Ka inona no sarotra amin'ny valiny marina? Ny fanamby iray dia azo antoka fa mitoetra ao amin'ny foto-kevitra sarotra amin'ny faharetan'ny maha-izy azy.
Iza ianao iza? Ilay olona ianao androany? Dimy taona lasa? Iza ianao 50 taona aorian'izay? Ary rahoviana no amin'ny '? Ity herinandro ity? Androany? Ity ora ity? Ity faharoa? Ary lafiny inona aminao no 'izaho'? Vatana ara-batana ve ianao? Ny eritreritrao sy ny fahatsapanao? Ny fihetsikao? mivezivezy, ary noho izany dia mety ny mampiseho ny fahasarotana, ilay mpahay tantara grika Plutarch dia nampiasa ny tantaran'ny sambo iray. Manao ahoana ianao 'I'? Araka ny angano, Theseus, ilay mpanjaka mpanorina angano an'i Athens, dia namono irery an'i Minotaur Kreta ratsy fanahy ary niverina nody an-tsambo. Mba hanomezam-boninahitra an'ity asa mahery fo ity dia nitazona tamim-pitandremana ny sambon'izy ireo nandritra ny 1000 taona ny Ateniana ary namerina ny diany isan-taona.
Isaky ny tonta na simba ny ampahany amin'ny sambo, dia nosoloina sombin-javatra mitovy ihany izany, mandra-pahatongan'ny fotoana sasany dia tsy nisy sisa tavela. Nanamarika i Plutarch fa ny sambon'i Theseus dia ohatra iray amin'ny filozofika mifanohitra amin'ny filaharany maharitra amin'ny maha-izy azy. Ahoana no fomba azo soloina ny faritra tsirairay amin'ny zavatra iray nefa dia mijanona ho tsy miova izy io? Alaivo an-tsaina hoe misy sambo roa: ny sambo notenenan'i Thisus tany Atena, ny sambo A, ary ny sambo izay navoakan'ny Ateniana 1000 taona taty aoriana, ny sambo B.
Tsotra be ny fanontanianay: mitovy amin'ny B ve ny A? Misy ny milaza fa vao 1000 taona izao no nisy sambo Theseus, ary satria ny fanovana natao dia natao tsikelikely, dia tsy nijanona ho sambo angano izany. Na dia tsy manana faritra iraisana aza izy ireo, dia mitovy isa ny sambo roa, izany hoe iray sy iray ihany, ka ny A dia mitovy amin'ny B.
Saingy ny hafa kosa mety hilaza fa tsy niondrana an-tsambo B mihitsy i Theseus ary ny fanatrehany an-tsambo dia toetra iray ilaina amin'ny fananana ao amin'ny sambo Theseus. Tsy ho tafavoaka raha tsy misy azy. Na dia mitovy isa aza ireo sambo roa, dia tsy mitovy toetra izy ireo, ny A dia tsy mitovy amin'ny B.
Fa inona no mitranga rehefa mijery ity fihodinana ity isika? Ahoana raha, rehefa nariana daholo ny sambo tany am-boalohany, nisy olona nanangona azy rehetra ary namory ny sambo voalohany tany am-boalohany? Rehefa vita izany dia tsy isalasalana fa sambo ara-batana roa no hisy: ny iray miantsona any Atena ary ny iray any an-tokontanin'ny lehilahy. Na iza na iza dia afaka mitaky ny lohateny hoe 'The Ship of Theseus', saingy io ihany no izy. Ka iza izany, ary ny tena zava-dehibe, inona no ifandraisany? o miaraka aminao? Tahaka ny sambon'i Theseus, ianao dia fitambaran'ireo faritra miovaova hatrany: ny vatanao, ny sainao, ny fihetsem-ponao, ny toe-javatra misy anao ary na dia ny quirks-nao izay miova tsy miova ihany nefa mbola mijanona amin'ny fomba mahatalanjona sy tsy mitombina indraindray, dia mijanona ho izay koa iray amin'ireo antony mahatonga ny fanontaniana hoe 'Iza moa aho?' be pitsiny.
Ary mba hamaliana azy io, toy ny saina be dia be eo alohanao, dia tokony ho vonona ianao hidina any amin'ny ranomasina tsy misy fotony izay mifanohitra amin'ny filozofika. Na mety hamaly fotsiny ianao hoe: 'Maherifonitra malaza aho izay mandeha sambo matanjaka amin'ny diany epic.' Mety handeha koa izany.
Fa maninona i Beethoven no nanoratra an'i Eroica?
Tamin'ny faran'ny taona 1803,Beethovendia nanoritsoritra ny gadona epika vaovao nataony, nybe herim-po. Nahazo aingam-panahy avy amin'ny filam-banin'ny Tolom-piavotana frantsay izy ary natokana ho an'ny maherifony, izay toa mpamonjy lehibe ny vahoaka tamin'izany: Napoleon.
Ludvig van Beethoven dia teraka tany Bonn tamin'ny desambra 1770. Nianatra piano sy lokanga niaraka tamin'ny rainy izy hatramin'ny mbola kely. Hoy i Johann rainy: 'Andray! Zahao ny fahombiazan'ny Leopold Mozart taorian'ny fananana zaza 2! 'Nandainga mihitsy aza izy momba ny taonan'ny Ludwig tao amin'ny afisy fampisehoana mba hampamirapiratra azy kokoa.
Heverinao fa ny reny aziatika ihany no afaka
KUNG PAO NY CHICKEN-nao, na
kodiarana bisikileta mtn manokana
MAPO NY TOFU ANAO? Làlan'ny fironana tamin'ny taonjato faha-18. Mpisotro toaka mahery setra izy. Tsia tsia! - * mitaraina noho ny fanaintainana * - sosotra! - * mitaraina noho ny fanaintainana * - tsy manao fanazaran-tena mihitsy ianao! - Argh! - Mila mitady vola aho! Uh misy miantso ny serivisy fiarovana ny zaza.
Tamin'izy 16 taona dia nankany Vienne izy satria Mozart no tadiaviny ho Senpai-ny. Tsy misy mahalala hoe nifankahita izy ireo satria tsy maintsy nody i Ludwig satria narary ny reniny. Taorian'ny fahafatesan'ny reniny dia nihombo ny olan'ny fisotroan-drainy ary tsy maintsy nandray andraikitra tamin'ny fikolokoloana ny ankohonany izy.
Mampalahelo fa nanapa-kevitra ny hiditra ao amin'ny andian-jiolahy viola izy. Tsindrio E # haneho fanajana. Tamin'ny 1792 dia nifindra tany Viena izy, ary ny mpampianatra voalohany dia nisy lehilahy iray izay nanoratra ity hira fiderana ity.
Nanomboka nanamboatra olona izy. Ny fomba fiasan'izy io dia mila mamorona na manao zavatra ary na oviana na oviana ny mpiaro anao, ary mahazo fanampiana ara-bola ianao ho valiny. Eny, toy ny dadako siramamy.
Ny iray amin'ireo vehivavy manan-danja indrindra tamin'ny fiainany dia ny mpianatra iray antsoina hoe Josephine. Na dia tsy azo ekena ho an'ny manan-kaja aza ny nanambady olon-tsotra, dia nifandray akaiky tokoa i Josephine sy i Ludwig. Nanoratra taratasy fitiavana be dia be izy, ary voalaza fa mpiasan'ny taratasim-pitiavana miafina natao ho an'ilay 'malalany tsy mety maty'.
Mino ny mpahay tantara fa mety nisy vehivavy manan-danja hafa nantsoina hoe Elise tamin'ny fiainany, saingy mbola tsy fantatra ny momba azy. Maro amin'ireo sonata piano ananany izao no heverina ho famakiana ilaina amin'ny mpianatra piano. Rehefa mandalo efitrano fanazaran-tena any amin'ny oniversite mozika ianao dia mety ho maheno pianôista vitsivitsy mitomany sy mikiakiaka rehefa mianatra ny Pathetique na Moonlight-nao.
Tamin'ny taonjato faha-18 dia nanomboka nahatsapa i Ludwig fa nivadika tsikelikely ny sofiny. (Tsy maheno anao aho!) Araka ny tolo-kevitry ny dokoterany dia nifindra tany amin'ny tanàna kely iray any Austria antsoina hoe Heiligenstadt izy. Raha teo izy, dia nanoratra taratasy malaza ho an'ireo rahalahiny: 'Ankoatr'izay, tena naniry hamono tena aho.
Saingy mahatsapa aho fa manana zava-kanto be ao anaty ka tsy maintsy aseho an'izao tontolo izao alohan'ny hahafatesako, ka tsy nanao izany aho. 'Tamin'ny fiandohan'ny taona 1804 dia nahavita ny firafitry ny Symp Schatz faha-3 i Beethoven, izay amin'ny lafiny maro no manamarika ny fifandimbiasan'ny fitiavan-tanindrazana sy ny fitiavan-tena. Eny, izy dia toa ny rain'ny tantaram-pitiavana.
Ny hetsika voalohany irery dia saika ny feon-kira klasika iray manontolo, hoy izahay, i Beethoven dia mialoha ny androny. Nanomboka nanalavitra ireo rafitra nentin-drazana napetrak'ireo boomera teo alohany koa izy tamin'ny alàlan'ny fampidirana coda lava tamin'ny faran'ny hetsika voalohany. Raha tokony hampiasa ny coda hamita haingana ilay fehezanteny dia nampiasa azy i Guy mba hivoatra sy hijerena lohahevitra.
Nihevitra ny olona tamin'ny androny fa tsara ny fitendreny, saingy lava loatra izany ary toa tsy misy farany. Raha heverina fa mahery fo tamin'ny Revolisiona frantsay izy hanonganana ny mpanjaka, dia natokan'i Beethoven io hira io ho an'i Napoleon taoriana kelin'izay dia fantany fa nanolotra ny tenany ho mpanjaka i Napoleon. Tezitra be i Beethoven ka nanery an-keriny ilay lohateny.
Fotoana fohy taorian'ny nahavitan'i Eroica dia nanomboka nanamboatra izay ho lasa zava-misy i Beethoven amin'ny farany - ilay symphony manjavozavo izay tsy mbola henonao mihitsy angamba. Azo antoka fa tsy heverina ho antony mozika malaza indrindra teo amin'ny tantaran'ny olombelona izany. Nanomboka namorona ny symphony faha-9 tamin'ny 1822 izy.
Hoy izy: 'Inona ireo hadalana mbola tsy nataoko? Ah, angamba ampiasao ny antoko mpihira sy soloista amin'ny feon-kira. 'Tamin'io fotoana io dia marenina daholo izy, saingy mbola nanitrikitrika ny hitarika ny premiere tenany ihany. Notadidin'i Joseph Böhm ilay mpitendry lokanga: 'Nitarika i Beethoven, izany hoe nijoro teo alohan'ny fiantsonan'ny mpitarika izy ary nitifitra toy ny adala.
Indray mandeha naninjitra ny tenany tamin'ny haavony feno izy, ny manaraka dia niondrika tamin'ny tany izy, nikapoka ny tànany sy ny tongony toa te-hilalao zava-maneno rehetra izy ary hihira ireo choruse rehetra. 'Toerana fisotroana vitsivitsy no tsy lavitra an'izay lalaovin'ireo mpitendry mozika. Ka mbola nanofahofa tanana ihany izy rehefa nifarana ny mozika. 3 taona taorian'ny premiere of his 9th Symphony, Beethoven dia maty tamin'ny aretina tamin'ny faha-56 taonany.
Taty aoriana teo amin'ny tantara, mpamoron-kira Prom Inte maro hafa no maty na dia taorian'ny nanoratany ny feon-kira faha-9 na ny faha-10. Tsy i Beethoven ihany no nanova ny làlan'ny tantaran'ny mozika kilasika mandrakizay, fa toa namorona ozona hamono ny mpamoron-kira aorian'ny Symphony faha-9 ihany koa izy!
Inona no nanoratana an'i Eroica?
Tamin'ny farany, ny asa dianamoakatamin'ny taona 1806 mitondra ny lohateny 'Sinfoniabe herim-po ahitanahankalazana ny fahatsiarovana olona lehibe. ' Tao anaty seho tsy miankina sy tsy miankina manokana no nandrenesana azy voalohany, nanomboka ny voalohan'ny volana aogositra 1804 tao amin'ny lapan'ny tanàna nahaterahany ny Printsy Lobkowitz, izay notokanana ny asa.7. 2006.
Tena teny ve i Eroica?
be herim-podia anarana.
Iza no namono an'i Beethoven?
Azo inoana fa ny tena antony nahatonga azyFAHAFATESANAfanapoizinana firaka. Araka ny efa nolazaiko,BeethovenTia misotro divay maro karazana, fa ny tena tiako dia karazan-divay mety ho azonao tamin'izany andro izany izay nohamafisin'ny firamainty. Ka nivoka ny atiny, zava-misy voamarina teo amin'ny fizahana ny fizahana azy.23 2020.
Inona ireo teny farany nataon'i Beethoven?
Taorian'ny nividianan'ny mpanontaBeethovenDivay tavoahangy 12 ho fanomezana, nymatympamoron-kirany teny farany dia: 'Mampalahelo, miantra, tara loatra! '
Classical ve i Eroica sa tantaram-pitiavana?
Beethoven'sbe herim-po: Ilay Lehibe voalohanytantaram-pitiavanaSymphony.
Nihaona ve i Mozart sy i Beethoven?
Andro ady totohondry any Bonn
Na dia tsy fantatsika tsara aza izanyMozart sy BeethovenHATRANYamin'ny, tena fantatsika fa Haydn syBeethoven nanao. Haydn dia iray amin'ireo olona nalaza indrindra tamin'nyBeethoven'sasa voalohany. Nanomboka tamin'ny Andro Boxing 1790, 11 andro monja taorian'ny nilazan'i Haydn ny veloma faranyMozart.18. 2019.
Fa maninona no nofoanana i Beethoven?
Beethoven nananany fiheveran-tena ho avo indrindra ary nampitaha azy tamin'ny fampiononana lehibe indrindra tao Roma. Buonaparte amin'ity indray mitoraka itynananananambara ny tenany ho emperora.Nofoanana i Beethovennyfanoloran-tenamilaza Buonapartediatsy iza fa ny olona maty mahazatra izay nanaram-po tamin'ny faniriany manokana hihevi-tena ho olona ambony.19 2018.
Iza no namono an'i Mozart?
Narary ara-batana sy ara-tsaina i Salieri tamin'ny fararano 1823, naiditra hopitaly Viénna, ary tao anaty saina very saina dia niampanga tena honamono an'i Mozart. Niely haingana eran'i Vienna ny tsaho. Ny fanondroana azy ireo dia hita ao amin'ny bokin'i Beethoven resadresaka tamin'izany.